MONOLISK dia mamela anao hamorona ny tranomaizinao ary hizara izany amin'ny namanao | Androidsis
Monolisk dia lalao RPG hetsika vaovao izay miavaka amin'ny fahaizana omeny antsika hamorona tranomaizintsika manokana ary azontsika zaraina amin'ny mpilalao hafa amin'ny Internet izany. Midika izany fa afaka milalao ny an'ny sasany ianao ary koa mamorona sy mihinana ny voanio mba hahazo isa ireo trano-maizina ireo.
Lalao izay boaty fasika ho azy io hamoronana ireo trano-maizina ireo fa homena isa izy ireo ary amin'izany dia hahazo ny fankatoavan'ny vondron'olona mpilalao izay hitantana ny famoronana ny atiny hilalaovanao; mifototra hatrany amin'ireo singa ananan'i Monolisk hahafahantsika mamorona ny trano-maizina; zavatra toa ny Super Mario Maker.
1 Tamin'ny andron'ny mpamorona atiny
2 Angony karatra ho an'ireo maherifonao 5 ao MONOLISK
3 Io fomba fijery isometrika manokana io
Tamin'ny andron'ny mpamorona atiny
monoliska dia mifototra amin'ny iray amin'ireo Maxim ankehitriny Ary tsy iza izany fa ny famoronana atiny izay alaina avy eo amin'ny tambajotra sosialy sy sehatra video toa ny YouTube. Mahaliana izay ahafahanao mamorona tranomaizina misy interface izay manana ny zavatra rehetra ilainao an-tsaina hoe aiza no azon'ny mpilalao aleha, inona ny entana horaisina ary firy ny fahavalo tokony hokapohin'izy ireo alohan'ny hahitana ny fivoahana ao an-tranomaizina.
El ny lalao dia hetsiky ny devoly RPG (aza adino Ity mifototra amin'ny HP Lovecraft sy Blizzard's) izay hamindrantsika ny maherifontsika amin'ny tranomaizina izay hiatrehany ireo fahavalo hafa ary manana fanitarana voafetra izy io. Tianay ho be dia be izy ireo, saingy tsy lava raha toa ka mety. Tsy midika izany fa mankafy ny ambaratonga tsirairay isika ary isaky ny milalao trano-maizina vaovao isika dia manana izany ahiahy izany momba izay ho efa nomanin'ny mpilalao iray any amin'ny faritra hafa amin'ny planeta ho antsika.
Raha atao teny hafa, amin'ny MONOLISK dia hanao izany ianao mahay mamorona tranomaizina, zarao amin'ireo mpanaraka anao, ampitao ny maherifonao ary valio ireo ambaratonga izay noforonin'ny namanao. Toy izao no hamaritana tsara ny lalao izay tokony hampiakarana sy hanatsarana ny fitaovan'ny maherifontsika. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia voalohany RPG voalohany ihany koa isika.
Angony karatra ho an'ireo maherifonao 5 ao MONOLISK
Mamela antsika ihany koa ny MONOLISK manangona karatra izay hiandraikitra ny fampitaovana ireo maherifontsika 5 miaraka amin'ny fitaovana, fahaizana, zavaboary ary tontolo iainana. Ireo taratasy ireo dia hanampy antsika hamorona ny trano-maizina any aoriana. Miresaka momba ny fomba hanokafanao ny atiny ianao rehefa milalao azy io, azonao ampiasaina izany hamoronana tranomaizina vaovao izay misarika ny sain'ny mpilalao hafa.
Amin'ny fitambarany dia manana isika Maherifo 5 samy hafa miaraka amin'ny fahaizany manokana ary izay hampifanarahintsika amin'izany raha aleontsika milalao ody na mpiady. Amin'ity fototra ity dia manana RPG hetsika izahay, izay miorina amin'ny fanavaozana vaovao, dia mety hiteraka traikefa tsara kokoa. Afaka manantena isika fa misy mpilalao maro kokoa hanatevin-daharana an'ity traikefa amin'ny famoronana tranomaizina ity hizara azy ireo.
Ary raha miatrika freemium isika izy io dia tokony hatao satria ny ampahany amin'ny atiny dia voaloa. Ny fonosana fandoavam-bola dia ny fomba ahafahan'ny mpamorona manohy miasa amin'ity lalao ity ary manampy atiny izay azontsika atao hatrany ny mankafy. Efa misy mpilalao mitady fomba hanalana azy io, saingy tsy maintsy takarina fa ny lalao manana ny kalitaon'ny MONOLISK any ho any dia mila mijanona mahitsy kokoa miaraka amina hevitra manaitra toy izany izay an-tànany.
Io fomba fijery isometrika manokana io
MONOLISK mametraka antsika eo alohan'ny fomba isometrika ihany koa izany misarika ny saintsika izany satria ahafahantsika mihetsika mandritra ny halavan'ny ambaratonga ary miaraka amin'izay dia manana fahitana lehibe momba ny zava-mitranga. Ary toy ny amin'ny lalao multiplayer hafa izay mamorona atiny ny mpilalao, azonao atao ny manantena ny ambaratonga sarotra loatra. Azonao atao ny mahita ny isa azon'izy ireo hahalalanao ny fahasarotan'izy ireo. Ary eny, azonao atao ny manombatombana ny tranon'ny hafa.
Raha ny fahitana azy dia lalao miasa tsara sy izay manasongadina ny famolavolana ny tarehin-tsoratra sy ireo tranomaizina manintona tena manintona. Angamba tsy ampy fisehosehoana izany amin'ny vokatry ny fahaiza-manao, fa hatramin'ny ambaratonga voalohany dia efa azo tsapain-tanana fa ho hitantsika izy ireo amin'ny habe sy vokany lehibe kokoa.
Un lalao vaovao antsoina hoe MONOLISK ho an'ny Android-nao ary miorina amin'ny hevitra lehibe izany: mamorona, mizara, milalao ary manome fitaovana. Raha zavatra hafa no tadiavinao ary misy ny Internet dia efa manana lalao ianao mandritra ny volana maro. Avelanay miaraka amin'ny Elementor Dungeon ianao izay, araka ny fanazavan'ny anarany tsara, dia feno trano-maizina.
Manintona tokoa ny fahitana
Ny fahefana mamorona sy mizara trano-maizina
Tsy misy fisehosehoana kely amin'ny vokatry ny majika
MONOLISK - RPG, CCG, mpanao trano-maizina
Developer: Zavakanto Trickster
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Mamorona sy milalao ny tranomaizin'ny hafa amin'ity hetsika RPG malaza antsoina hoe Monolisk ity
Stardew Valley amin'ny antsasaky ny vidiny mandritra ny andro vitsivitsy: ny anjara asa fambolena tsara indrindra amin'ny findainao